Xafiiska MD Farmaajo oo beeniyay fashilka wadahadalladii socday | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Xafiiska MD Farmaajo oo beeniyay fashilka wadahadalladii socday
Warar soo baxay mar sii horreysay ayaa muujinaya in ay guuldareysteen dadaallo lagu doonayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxwayne Maxamad Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Maxamad Xuseen Rooble.
Dadaalkan ayaa waxaa gar-wadeen ka ahaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamad Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), sida horey loo baahiyay.
Wasiir dowlaha madaxtooyada Galmudug Cumar Axmed Shido ayaa baraha bulshada ku faafiyay inay “fashil ku soo dhamaadeen” deadaalladii ugu dambeeyay ee lagu xallinayay khilaafka labada masuul.
Ma jira ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha, balse mas’uul ka tirsan Villa Soomaaliya ayaa laanta afka soomaaliga ee BBC-da u sheegay in wadahadallada ay wali socdaan, filayaana inay guul ku soo dhammaadaan
“Waxay na bogaadinayaan dadaalada guddoomiye Mursal iyo madaxweyne Qoorqoor, Waxaan ku kalsoonahay dadaalka socda in uu guul ku dhammaanayo,” ayuu yiri sarkaalaasi oo ka gaabsaday in magaciisa la sheega.
Previous articleQaramada midoobay oo soo jeedisay in wax laga qabto xaaladda Myanmar
Next articleBooliska Soomaaliya oo war kasoo saaray qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho